SADC Yorova Imbwa Yakaviga Mupini paNyaya yeZimbabwe
Mbudzi 18, 2010
Sangano reSADC riri kutarisirwa kuzeya nyaya yehwaro hwesarudzo muZimbabwe panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muhurumende yemubatanidzwa.
Chipangamazano chemutongi gava panyaya yeZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vati nyaya iyi ichange iri mudariro pamusangano weSADC uri kutanga muGaberone kuBotswana neChishanu.
Asi MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti SADC inofanirwa kugadzirisa nyaya dzanetsa dziri kukonzerwa nemutungamiri weZanu PF, uye vari mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vari kuita humbimbindoga muhurumende.
Zvinhu zvinonzi zvakatonyanya kuipa munyika nemusi weChipiri apo vasori vakayedza kusecha vatevedzeri vemutangamiri wehurumende, VaArthur Mutambara naMuzvare Thokozane Khupe, vasati vapinda mudare reparamende.
MDC inoti uku kushora vatungamiri vehurumende uye nyaya iyi inofanira kuti iongororwe. Vashandi vakaita izvi vanoti vaitsvaga michina yavanoti iri kushandiswa kutapa zvinotaurwa mudare remakurukota. Masangano akazvimirira oga akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neTransparency International Zimbabwe, anoti kushungurudzwa kwevemasangano akazvimirira oga kwave kunyanya kubva zvanzi pangangoitwa sarudzo gore rinouya. Vatori venhau vanotiwo vave kuoneswawo chitsvuku nemapurisa nekusungwa nekutyorerwa kodzero dzavo.
Nekune rimwe divi, mutauriri wemauto e One Brigade, Captain Richard Mizha, vanoti masoja atangawo hurongwa hwekupinza vanhu basa.
Vakawanda vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vamwe vose vari kuda kupinda muchiuto vanonzi vanofanirwa kunge vaine Ordinary Level muzvidzidzo zvishanu.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti vanoda kuti SADC igadzirise zviri kunetsa muhurumende kwete kumhanyira kunyaya dzesarudzo.
Sachigaro vesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo, re Zimbabwe Election Support Network, VaTinoziva Bere, vanoti chinhu chinenge chakanaka kuti SADC ibude nehwaro hwesarudzo dzinofanirwa kutevedzwa nemapato ose ari munyika.